तपाईमा यस्ता लक्षणहरु देखिएका छन् ? याद राख्नुहोस् एचआईभी हुन सक्छ::Leading Digital News Portal Of State7| Political News, Science, Social, Sport, Economy, Business, Entertainment
तपाईमा यस्ता लक्षणहरु देखिएका छन् ? याद राख्नुहोस् एचआईभी हुन सक्छ
प्रकाशित मिति : आइतवार, माघ १४, २०७४
असुरक्षित यौन सम्पर्क, संक्रमित आमाले बच्चा जन्माएमा अथवा सुईहरुबाट सर्ने गर्दछ एचआईभीरएड्स । यो रोगबाट विश्वका धेरै मुलुकहरुमा मानिसहरु मृत्युको सिकार भइसकेका छन् । यद्यपी अहिले सम्म यसको पूर्ण रुपमा निदान हुने औषधि भने भेटिएको छैन् ।
सुरुमा त यो रोग लागेपनि पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ । पत्ता लागेपनि धेरै मान्छेहरु उपचारका लागी अस्पताल जान डराउँछन्, र अस्पताल गएपनि उपचार पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । तर तपाईले अलिकति पनि सावधानी अपनाउनुभयो भने यो रोग लागेको समयमै थाहा पाउन सकिन्छ । जसले गर्दा औषधि उपचारमा केही टेवा पुग्छ ।
यी लक्षण देखिन्छन्
यदि एचआईभीले तपाईलाई पनि आक्रमण गर्न थालेको छ, तपाईकोकार्य क्षमता ह्रास हुँदै जान्छ । फलस्वरुप तपाईलाई थकान महसुुस हुन्छ । याद राख्नुहोस् काम नगरिकनै तपाईलाई थकान लाग्छ भने, यो एचआईभीको प्रारम्भिक चरण हुन सक्छ ।
टाउको दुख्ने समस्या
एचआईभी संक्रमण भएमा हाम्रो रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता पनि कम हुँदै जान्छ जसले गर्दा प्राय टाउको दुख्ने समस्या देखिन्छ । तपाईले लगातार टाउको र घाँटी दुखेको समस्या देखिएको छ, भने तुरुन्त रगत परिक्षण गरिहाल्नुहोस्, यो एचआईभीको संकेत हुन सक्छ ।
एकाग्रतामा कमी आउनु
यदि तपाईमा एचआइभीको संक्रमण छ, भने तपाईले चाहेर पनि आफ्नो काम वा पढाईमा पुरा ध्यान दिन सक्नुहुन्न् एचआईभीको लक्षण देखा परेमा एकाग्रतामा कमी आउँछ ।
लामो समयसम्म ज्वरो
ज्वरो आउनु एक समान्य समस्या हो, तर ज्वरो धेरै समयसम्म रहन्छ भने त्यो एचआइभीको प्ररमभ्कि चरण हुन सक्छ । यदि तपाईलाई लामो समयसम्म यस्तो समस्या देखियो भने रगत जाँच गरिहाल्नुहोस् ।
मांसपेशी दुख्ने समस्या
कुनै व्यक्तिमा एचआईभी संक्रमण भइसकेको छ, भने उसको मांसपेशी दुख्ने समस्या हुन्छ । यदि तपाईले लगातार आफ्नो मांसपेशी दुखेको महसुस गर्नुभएको छ भने तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा चेकजाँचका लागी जानुहोस् ।
तौल घट्दै जानु
एचआईभी संक्रमित व्यक्तिको तौल घट्दै जान्छ । यो रोग लागेपछि आफ्लाई मनपर्ने खाना पनि मन नपर्ने तथा खान मन नलाग्ने हुन्छ ।
एउटा भनाई नै छ, पुर्ण शरीरको बारेमा छालाले बोल्छ । हो एचआईभीको लक्षण देखिने वित्तिके छालालेपनि तपाईलाई सचेत गराउँछ । तपाईको छाला चिनाउने तथा दाग र धब्बा देखिने समस्या देखियो भने त्यो पनि एचआइभीको संक्रमण हुन सक्छ ।
राती पसिना आउनु
यदि रातको समयमा धेरै पसिना आउने समस्या, बेचैनी हुने, निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ भने त्यो एचआईभीको लक्षण हुन सक्छ ।
गौचरन बन्दै २५ बर्षदेखि बन्द गोकुलेश्वर विमानस्थल
छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी राख्न जग्गा व्यवस्थापन
गाेकुलेश्वरमा निगालोबाट उत्पादित सामग्रीको व्यापार बढ्दो
नेपाल-भारत मैत्री भवन महेन्द्र माबिलाइ हस्तान्तरण (फोटोफिचर)
शोकमग्न दार्चुला : जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको अन्त्येष्टि
लाली पुलको नेपाल-भारत संयुक्त अनुगमन